Bokin'i Elena Ferrante: solon'anarana super sales | Literatiora Vaovao
John Ortiz | 28/12/2021 18:04 | mpanoratra, boky, Novela
Elena Ferrante dia solon'anarana mpanoratra italiana iray izay namirapiratra ny tontolon'ny haisoratra eran-tany nandritra ny roapolo taona. Na dia nanomboka ny asa haisoratra tamin'ny taona 90 aza, dia nitombo ny asany tamin'ny 2012 taorian'ny famoahana azy. Ilay namana be, tantara natomboka ny tetralogy Mpinamana roa. Tamin'ny taona 2018, taorian'ny fahombiazan'ny saga, HBO dia nampifanaraka azy io ho an'ny fahitalavitra miaraka amin'ny anaran'ny boky voalohany ary hatramin'izao dia efa nisy fizarana 2 nalefa.
Efa ho 20 taona teo amin'ny tontolon'ny literatiora, ny mpanoratra dia manana katalaogin'ny tantara an-tsary sivy, tantaran'ny ankizy ary lahatsoratra iray. Tsy nahasakana azy handresy mpamaky tsy tambo isaina na any Italia na any amin'ny tontolo hafa ny tsy fitononany anarana. Ny tantarany farany, Ny fiainana lainga an'ny olon-dehibe (2020), dia navoakan'ny Time ho iray amin'ireo boky 100 tsara indrindra amin'ny taona.
1 Ny bokin'i Elena Ferrante
1.4 Tantaran'ny Perduta Bambina (2014)
2 Momba ny mpanoratra, Elena Ferrante
2.1 Anita Raja, ilay "mpanoratra" ao ambadik'i Elena Ferrante
L'amore tezitra (1992)
Io no boky voalohany nosoratan'ny mpanoratra italiana, izay natokanany ho an-dreniny. Navoaka tany Espaina izy io niaraka tamin'ny anarana Fitiavana mahasosotra (1996), nadikan'i Juana Bignozzi. Izy io dia tantara iray napetraka tany Naples tamin'ny tapaky ny taonjato faha-XNUMX, manana toko 26 ary mitantara amin’ny olona voalohany. Ao amin'ny pejiny ny fifandraisan’ny reny sy ny zanany vavy dia mifandray — Amalia sy Delia—.
Ny 23 mey teo no nahitana fatin’olona iray nitsingevana tao anaty ranomasina, rehefa avy namantatra ny razana dia voamarina fa i Amalia io. Tonga teo an-tsofin’i Delia ny vaovao mampahory, tamin’ny fitsingerenan’ny andro nahaterahany. Ny fahafatesan'ny reniny no tsy nampoiziny tamin'io andro io.
Taorian'ny loza, Nanapa-kevitra ny hiverina any Naples niaviany i Delia mba hanadihady ny zava-nitranga, satria gaga izy fa tsy nanao bra fotsiny i Amalia. Rehefa tonga tao an-tanàna izy, dia tsy mora taminy ny miatrika ny lasa izay niezaka mafy tsy niraharaha, ilay fahazazana sarotra izay nanapa-kevitra ny hanakana azy ao an-tsainy.
Rehefa namaha ny zava-miafina manodidina an’ireo olon-dratsy izy, dia niharihary ny fahamarinana noforonin’izy ireo ny tontolo iainanao, ny fiainanao ary ny toetranao, rawness izay hahatonga anao hahita zava-misy vaovao.
Ilay zanakavavy maizina (2006)
Izy no boky fahatelo amin'ny literatiora. Nadikan'i Celia Filipetto izy io ary navoaka tamin'ny teny espaniola miaraka amin'ny lohateny Ilay zanakavavy maizina (2011). Tantara notantaraina tamin'ny olona voalohany izy io avy amin'i Leda, ilay mpilalao sarimihetsika, ary ny maha-reny no tena lohaheviny. Ny tetika dia napetraka ao Naples ary mivelatra mihoatra ny 25 toko fohy.
Leda dia vehivavy efa ho 50 taona, nisara-panambadiana ary manan-janaka roa vavy: Bianca sy Marta. Mipetraka any Florence izy, ary ankoatra ny fikarakarana ny zanany vavy, dia mpampianatra literatiora anglisy izy. Miova tampoka ny fiainanao mahazatra rehefa Nanapa-kevitra ny hifindra any Canada miaraka amin'ny rainy ny zanany.
Andian-teny nataon'i Elena Ferrante
Ilay vehivavy, lavitry ny fahatsapan-tena nostalgique izy, dia mahita ny tenany maimaim-poana hanao izay tianao, ka mandeha vakansy any Naples niaviany.
Raha miala sasatra eny amoron-dranomasina mizara amin'ny fianakaviana maro eo an-toerana, hamelona indray, tsy nahy, ny lasa. Amin'izay fotoana izay, notafihin'ny tsy fantatra tonga ao amin'ny fitadidiany, mandray fanapahan-kevitra sarotra sy mampidi-doza.
Ny vavy maizina ...
Ilay namana mamiratra (2011)
Izy io no tantara voalohany amin'ny saga Mpinamana roa. Navoaka tamin'ny 2011 ny dikan-teny italiana azy. Herintaona taty aoriana dia nadikan'i Celia Filipetto tamin'ny teny espaniola izy io ary naseho tamin'ny anarana hoe: Ilay namana be (2012). Notantaraina tamin'ny olona voalohany ilay tantara ary nitranga tany Naples tamin'ny taonjato farany. Amin'ity indray mitoraka ity, ny fisakaizana no fototry ny tantara, ary misy tanora roa ho mpilalao fototra: Lenù sy Lila.
Nandany ny fahazazany sy ny fahatanorany i Lenù sy Lila any amin’ny tanindrazany, toerana tena mahantra any ivelan'i Naples. Niara-nihalehibe ireo tovovavy ary niova ny fifandraisan'izy ireo teo amin'ny fisakaizana sy ny fifandrafiana mahazatra amin'izany taona izany. Samy manana ny nofinofiny mazava, resy lahatra ny handresy ny tenany ary hiala amin'io toerana maizina io. Mba hanatratrarana ny tanjonao dia ny fanabeazana no ho zava-dehibe.
Ilay namana mahafinaritra (Roa ...
Tantaran'ny perduta bambina (2014)
Ilay tovovavy very (2014) — lohateny amin’ny teny espaniola — no asa mamarana ny tetralogy Mpinamana roa. Nitranga tamin'ny taonjato faha-XNUMX tany Naples ny tantara ary manasongadina an'i Lenù sy Lila amin'ny fahalehibeazany. Samy nandeha ny lalana samy hafa, izay nahatonga azy ireo hanalavitra, fa tantara vaovao momba an'i Lenù indray no hampiray azy ireo. Ny tantara dia nandeha tamin'ny andron'ireo vehivavy roa ireo ary manao jery todika ny fiainany.
Lasa mpanoratra nalaza i Lenù, nifindra tany Florence, nanambady ary niteraka. Nisaraka anefa ny fanambadian’izy ireo. Ho an'i Lila dia hafa ny anjarany, tsy nahavita nandao ny tanànany izy ary mbola miady mafy amin'ny tsy fitoviana izay manjaka ao. Nanapa-kevitra ny hanomboka boky vaovao i Lenù ary nahatonga azy niverina tany Naples ilay lohahevitra, izay hahafahany hihaona amin'ny namany indray..
Ilay tovovavy very (Roa...
Taorian'ny fahombiazan'ny saga Mpinamana roa, Elena Ferrante nanolotra Ny fiainana lainga an'ny olon-dehibe (2020). Tantara iray manana an'i Giovanna ho mpilalao fototra izy io ary nitranga tany Naples tamin'ny taona 90.. Ity tantara ity dia manana toetra manokana an'i Ferrante, izay nilaza tamin'ny resadresaka nifanaovana hoe: "Fony mbola kely aho dia mpandainga be. Teo amin'ny faha-14 taonako, taorian'ny fanalam-baraka maro, dia nanapa-kevitra ny ho lehibe aho ”.
Zazavavy 12 taona i Giovanna de an'ny bourgeoisie Neapolitanina. Indray andro henony tamin’ny dadany -Raha tsy fantany- fa vehivavy ratsy tarehy izy, toa an’i Vittoria nenitoany. Liana sy very hevitra tamin’izay reny izy, ka hitany fa mpihatsaravelatsihy sy mpandainga ny olon-dehibe.. Notafihin’ny fahalianana izy ka nanapa-kevitra ny hitady an’io vehivavy io, mba hahitany mivantana izay tian’ny rainy holazaina.
Ny fiainana lainga n ...
Momba ny mpanoratra, Elena Ferrante
Noho ny tsy fitononana azy dia vitsy ny antsipiriany momba ny tantaram-piainan'ny mpanoratra italiana. Maro no milaza fa teraka tany Naples tamin'ny 1946 izy ary mipetraka any Turin amin'izao fotoana izao. Nandritra ny androm-piainany dia tsy fantatra afa-tsy tamin'ny tafatafa vitsivitsy nataony tamin'ny alàlan'ny mailaka izy.
Anita Raja, ilay "mpanoratra" ao ambadik'i Elena Ferrante
Ao amin'ny 2016, vehivavy iray antsoina hoe Anita Raja "nanamafy" tamin'ny alàlan'ny mombamomba azy tao amin'ny Twitter fa izy no tao ambadiky ny solon'anarana.. Tamin’ny alalan’ny hafatra maromaro no niaiky fa “mpanoratra” ity olona ity ary nangataka ny hanajana ny fiainany manokana, avy eo nofafana ilay kaonty. Na izany aza, fotoana fohy taty aoriana Tommaso Debenedetti - malaza amin'ny fanaparitahana tafatafa hosoka amin'ny olo-malaza - dia nilaza ireo bitsika, niteraka fisalasalana bebe kokoa.
Nanome toky i Debenedetti fa nihaona tamin'i Raja izy, ary nanome azy ny vaovao. Na dia eo aza ny dian'ny mpanoratra mampiahiahy - izay miantso ny tenany ho "Ilay Tompondakan'ny lainga italiana" - nanamafy ny teoria ny mpanao gazety sasany. Mba hanaovana izany dia nanontanian'izy ireo ny toerana nametrahana ny volan'ny zon'ny mpamorona ary nampidirina tao amin'ny kaontin'i Anita Raja izany, izay afaka manamarina fa azy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Haisoratra ankehitriny » entana » Novela » Ny bokin'i Elena Ferrante